कोहली, रोहित र बुमराहले बार्षिक ११ करोड पाउँदा अन्य भारतिय खेलाडीले कति पाउँछन् त ? हेर्नुस - News20 Media
January 16, 2020 N20LeaveaComment on कोहली, रोहित र बुमराहले बार्षिक ११ करोड पाउँदा अन्य भारतिय खेलाडीले कति पाउँछन् त ? हेर्नुस
काठमाडौं, माघ २ । भारतीय पूर्वक्रिकेट कप्तान महेन्द्रसिंह धोनी भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई)को ‘कन्ट्रयाक्ट लिस्ट’बाट बाहिरिएका छन् । विश्वकप क्रिकेटमा सहभागी भएपछि गएको ६ महिनादेखि मैदानबाट टाढिएका धोनीलाई बीसीसीआईले कन्ट्रयाक्ट लिस्टबाट हटाएको हो । उनी पछिल्लो समय ‘ए ग्रेड’मा सामेल थिए ।